यी हुन् जाडोमा उपयोगी ५ तरकारी | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home स्वास्थ्य यी हुन् जाडोमा उपयोगी ५ तरकारी
२०७६, २० मंसिर शुक्रबार ०८:५२
चिसो मौसममा शरीरलाई चिसोसँगै विभिन्न संक्रमणबाट बचाउन खानपानमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । यो वेला खानामा प्रशस्त मात्रामा सागसब्जी वा तरकारी समावेश गरेमा चिसोबाट बच्न सकिन्छ । अब जानौँ जाडोयाममा उपयोगी तरकारीबारे :
भिटामिन ए र सी प्रचुर मात्रामा पाइने गोलभेँडा स्वादमा मात्र नभई स्वास्थ्यका लागि समेत प्रभावकारी हुन्छ । सबैजसो मौसममा उपलब्ध हुने गोलभेँडा जाडोमा स्वास्थ्यमा लागि थप लाभदायी मानिन्छ । जाडोमा देखिने श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोग तथा छाला सुक्खा हुने समस्या नियन्त्रण गर्छ । गोलभेँडामा पाइने लाइकोपिनले शरीरमा बोसो कम गराउँछ । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
Previous articleपिसाब पोल्छ ? सावधान ! जटिल रोग हुन सक्छ
Next articleउत्खनन् अभावमा पहराका बहुमूल्य शिलाजित अलपत्र